ဇာနီကြီး – လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့်စက်မှုဇုံလုပ်ငန်းများဖြင့် ဝိသမခရိုနီများပပျောက်ရေး | MoeMaKa Burmese News & Media
ဗိုလ်ထက်မင်း - အမျိုးသားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်ခံရပြီဆိုရင် ဘယ်လိုစီမံချက်ရှိရင် ကောင်းမလဲ (၁)
ဝင်းနန္ဒာ (Myanmar Now) ● မတရားကျင့်ခံရသူ မသန်စွမ်းတို့၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး
ကိုသန်းလွင် - တောင်ကိုးရီးယားမှ အလုပ်ချိန်ပြဿနာ
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - အလွမ်းတွေပြေ အလန်းတွေဝေခဲ့တဲ့ ဆရာစွမ်း တွေ့ဆုံပွဲ
ဘေးကသာဂိ - ၂၀၁၈ အတွက် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဥပဒေအသစ်များ
လက်ထဲရောက်လာနိုင်သော တစ်သောင်းတန် အတု
မြင့်ကျော် - သတင်းသမားရဲ့ တာဝန်၊ ဝတ္တရား
ကမ္ဘာဖလားဘောလုံး၊ အုပ်စုပွဲများ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံး
မေနှင်းလဲ့မွန် - နိုဗာဟိုးက ရပ်ဆိုင်းတော့မယ့် ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး မီးအားပေးစက်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်တံခါးကို လှည့်ကြည့်ခြင်း (Khai Linn (Mayga Waddy)
ဇာနီကြီး – လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့်စက်မှုဇုံလုပ်ငန်းများဖြင့် ဝိသမခရိုနီများပပျောက်ရေး
ဇာနီကြီး၊ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၄
မြန်မာပြည်မှာ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ပြသနာ၊ အရှုပ်အရှင်းများစွာ ဖြစ်နေပြီး၊ လွှတ်တော်က ဖြေရှင်းဖို့ ကော်မတီဖွဲ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေ ဥပဒေရေးဆွဲ အတည်ပြုပြီးခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အကောင်ထည်ဖေါ်ဖို့ နည်းဥပဒေ မထုတ်နိုင်ပဲ ၈လတျော်နေလို့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌက တွန်းအားပေးခြင်း ခံရပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ အရေးကြီးလွန်းလို့ လွှတ်တော်မှာ အထူးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ လွှတ်တော်လူကြီးများက လယ်ယာမြေပိုင်ရှင်ကြီးများဖြစ်နေတော့ ဘေးခဏချိတ်ထာပါတယ်။ ဒါ အလွန်အရေးကြီးကြောင်းကို လွှတ်တော်အမတ်များနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အမြဲဆုပ်ကိုင်ထားရမှာပါ။ အခုဆောင်းပါးကတော့ လယ်ယာမြေဥပဒေ Land Reform အောင်မြင်စွာ အကောင်ထည်ဖေါ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံများ ကြီးပွားတိုးတက်ခဲ့ပြီး၊ မအောင်မြင်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားကျဆင်းပုံအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အိမ်ဖော်၊ အလုပ်သမား ရောင်းစားနေခြင်းကို ရပ်တံ့စေမဲ့ နည်းလမ်းအစ လယ်မြေယာဥပဒေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်အားလုံးသိပါတယ်။ အစိုးရသစ်လက်ထက် မြေယာဈေးကြီးလာခြင်းဟာ တနိုင်ငံလုံးပြည့် ဝိသမခရိုနီများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်ဝမ်၊ တောင်ကိုးရီးယား နဲ့ ဖိလစ်ပိုင် (၃)နိုင်ငံစလုံး အမေရိကန်အကူညီများစွာရပါတယ်။ အမေရိကန်ဦးဆောင်ပြီး စီးပွားစနစ်ကို ထူးထောင်ခဲ့ပါတယ်။ လယ်ယာမြေဥပဒေ အောင်မြင်စွာကျင့်သုံးနိုင်လို့ တိုင်ဝမ်၊ တောင်ကိုးရီးယား တို့မှာ ဝိသမခရိုနီစနစ် အနည်းဆုံးဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာ လယ်ယာမြေဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပေမဲ့ အကောင်ထည်မဖေါ်နိုင်ပဲ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်ဟာ လာဘ်စားမှုနဲ့စီးပွားရေး အနိုမ့်ဆုံးကို ကျရောက်သွားရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင် တောရွာများမှာတော့ မြန်မာပြည်လို ဆင်းရဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာလောက်တော့ မမွဲတေရှာပါဘူး။ ဒီအကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် ဖဦးထုပ်နဲ့ရွှေမြန်မာ ဆောင်းပါး ရေးခဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျား။
ဆန်ဒီယာဂိုတက္ကသိုလ် “ဒေါက်တာယူဂျုန်ဆန်း၊ ပီအိပ်ခ်ျဒီ၊ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်”1 ရေးတဲ့စာတမ်းများကို လေ့လာမိပါတယ်။ သူက ကိုးရီးယားလူမျိုး၊ တောင်ကိုးရီးယားမှာ အမေရိကားမှာအလုပ်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာ ခရိုနီအရင်းရှင်အကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံကနေ စာတမ်းများ၊ စာအုပ် များစွာထုတ်ဝေ၊ ပိုချ၊ သင်ကြားပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြုစုတဲ့ စာတန်းတစ်ခုမှာ “ခရိုနီအရင်းရှင် တိုင်ဝမ်း၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်” နိုင်ငံ၃ခုကို နှိုင်းယှဉ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့် တိုင်ဝမ်း၊ ကိုးရီးယားတွေက ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစီးပွားနိုင်ငံဖြစ်ပြီး လာဘ်စားမှုများ အနည်းဆုံးရောက်သွားချိန် ဖိလစ်ပိုင်က လာဘ်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံအဆင့်က မတက်ပဲ၊ စီးပွားရေးတိုးတက်နှုန်းနှေးကွေးနေရခြင်းကို ရှင်းလင်းဖေါ်ပြပါတယ်။ ၁၉၅၀က ဂျပန်ပြီးရင် ဖိလစ်ပိုင်က အာရှတိုက်မှာ ဒုတိယစီးပွားအင်အားကြီး နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒီုနီးရှား အဆင့်မှာရောက်နေပါတယ်။ စီးပွားမတိုးတက်ပဲ၊ ပြည်တွင်း ဝိသမခရိုနီစနစ်ကြီး ဘယ်လို အမြစ်တွယ်သွားရသလဲ .. ဆိုတာကို အချက်လက်များစွာနဲ့ သုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ ဒေးဗစ်ခန်း (ကိုးရီးယားလူမျိုး ပါမောက္ခ) ရေးတဲ့ ” ခရိုနီကက်ပီတယ်လစ်ဇင် “2 စာအုပ်မှာလည်း မြန်မာပြည်အတွက်သင်္ခန်းစာယူစရာ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒေါက်တာယူ ရဲ့ စာတန်း ၂၀၀၇ မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကိုးကားချက်များစွားနဲ့ နိုင်ငံရေးလပ်စားမှု၊ အဆင့်မြင့်လာဘ်စားမှု များမှာ အဓိကရေးထားပါတယ်။ သာမန်ဝန်ထမ်းများ လာဘ်စားမှုကို မရေးပါဘူး။ ခရိုနီးအရင်းရှင်စနစ် ကျဆုံးဖို့ ဘက်စုံကနေ လေ့လာဆန်းစစ်ထားပါတယ်။ နောက်ဆုံး အဓိကအချက်က လူများ “ဝင်ငွေညီမျှအောင်”4 လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းလို့ ရေးထားပါတယ်။
ဘယ်လို “ဝင်ငွေညီမျှအောင်” လုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတော့ လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့်စက်မှုဇုံလုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာအကောင်ထည်ဖေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာယူ အချက်အလက်များအရ တိုင်ဝမ်၊ တောင်ကိုးရီးယား လယ်ယာမြေဥပဒေ အကောင်းထည်ဖေါ်နိုင်ခြင်းဟာ
– မြောက်ကိုးရီးယားခြိမ်းခြောက်မှု၊ တရုပ်ကွန်မြူနစ်ကို စိုးရိမ်မှုများ
– လွှတ်တော်မှ မြေပိုင်ရှင်၊ ခရိုနီများ အင်အားနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားမှာ ဂျပန်လက်အောက် လွတ်လာချိန် ၁၉၄၅ မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ထွန်ယက်နိုင်တဲ့မြေအားလုံးရဲ့ ၅၈% ကို လူဦးရေး ၂.၇% လူတည်းစုက ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြောယာဥပဒေကို လက်တွေအကောင်ထည်ဖေါ်ချိန်မှာ လွှတ်တော်တွင်း မြေပိုင်ရှင်များ တားဆီးမှုကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ် တောင်သူလယ်သမားများကို မြေတွေပြန်ပေးပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားမှာ လယ်မြေဈေးနှုန်းကိုတော့ ” တစ်နှစ်လုံးစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံတန်ဖိုး”5 ရဲ့ ၁.၅ဆ တောင်သူများက ပေးရပါတယ် ၊ ၅နှစ် အရစ်ကျ ပေးသွင်းစေပါတယ်။ တောင်သူတစ်ယောက်ကို မြေ ၃ဟက်တာ ထက်ပိုမပိုင်ရဘူး ဥပဒေသတ်မှတ်ပါတယ်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်က ထွန်ယက်နိုင်တဲ့မြေ ၁၈%ကို လူ ၆%ကပဲ ပိုင်တဲ့အခြေအနေ ရောက်သွားပါတယ်။ လယ်အငှားထွန်ယက်မှုတွေလည်း ၄၉% ကနေ ၇% ထိ ကျဆင်းသွားပါတယ်။
တိုင်ဝမ်မှာ ၁၉၄၈-၁၉၅၃ လယ်မြေဥပဒေ ကျင့်သုံးပြီး လယ်မြေများ တောင်သူလယ်သမားများကို ပြန်ပေးပါတယ်။ လယ်မြေဈေးနှုန်းကိုတော့ တစ်နှစ်လုံးစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံတန်ဖိုးရဲ့ ၂.၅ဆ တောင်သူများက ပေးရပါတယ် ၊
တောင်သူတွေ လယ်ပိုင်ဖြစ်လာတော့ လယ်သမားများ ဝင်ငွေပိုကောင်းလာပါတယ်။ ဒီတော့ တောင်သူလယ်သမား မိသားစုများ ပညာသင်နိုင်လာပါတယ်။ ပညာတတ်များဖြစ်လာပြီး၊ စက်မှုလယ်ယာ၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ ထွန်းကားလာပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာပါတယ်။ ပညာတတ်များ ဖြစ်လာခြင်းဟာ လူများ ဝင်ငွေမျှတမှုဖြစ်လာစေပါတယ်။ လူလတ်တန်းစားအရေအတွက် များပြားလာစေပါတယ်။
သုတေသနပြုချက်များအရ လယ်မြေဥပဒေပြဌာန်းကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ ၊ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူတွေဝင်ငွေညီမျှအောင် လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ.. ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လယ်သမားများရဲ့ ဆန်ကိုအစိုးရငွေ ဒေါ်လာ၂ဘီလျံလောက် ဆုံးရှုံးသွားတာ၊ အပြစ်မပြောရဲကြပါဘူး။ လယ်သမားများဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အဆင်းရဲဆုံးလူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ကို အစိုးရကပေးကမ်းတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့အဆင့်ထိ တက်လှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်အများစု (စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများ)ဟာ လယ်သမားမိဘမျိုးရိုးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လယ်သမားဘဝမြှင့်တင်ရေး အခြေခံဟာ လယ်လုပ်သူ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်ရေးပါပဲ။
ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန်မှာ ဖိလစ်ပိုင်စီးပွားရေးက အာရှမှာ ဂျပန်ပြီးရင် ဒုတိယဖြစ်နေပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူ အမေရိကန်များက ၁၉၄၈ခုနောက်ပိုင်းမှာ၊ တွန်းအားပေးလာပါတယ်။ မြေယာဥပဒေကို အကောင်ထည်ဖေါ်ဖို့ပါပဲ။ ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်တော်ထဲမှာ မြေပိုင်ရှင်တွေက အများစုဖြစ်နေပါတယ်။ ဥပဒေအကောင်ထည်ဖေါ်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး သမ္မတမားကို့စ် လက်ထက်မှာ အဆိုးဝါးဆုံး ခရိုနီအရင်းရှင်စနစ်နဲ့လာဘ်စားမှုများစွာကြောင့် သမ္မတမားကိုစ်ကို ၁၉၈၇မှာ လူထုအားနဲ့ဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ အာကွီနို တက်လာပြီး လယ်မြေဥပဒေကို ကြိုးစားအကောင်ထည်ဖေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ၃၀%ပဲ ပြီးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတများမှာ မြေပိုင်ရှင်တွေနဲ့၊ ခရိုနီတွေပဲ လွှတ်တော်ထဲမှာ အများစုဖြစ်နေလို့ ဖိလစ်ပိုင်မှာ လယ်မြေဥပဒေ ယခုအချိန်ထိ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
ရလဒ်ကတော့ ဖိလစ်ပိုင် နဲ့ တိုင်ဝမ်း၊ တောင်ကိုးရီးယားတို့ အခြေအနေ မိုးနဲ့မြေ ကွာခြားသွားပါတော့တယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဝိသမခရိုနီစနစ် ရှင်သန်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှ အစပျိုးခါစ ဝိသမခရိုနီစနစ်
လောလောဆယ် မြန်မာပြည်လွှတ်တော်မှာ ” လယ်မြေသိမ်းခံရမှု၊ လယ်မြေပြုပြင်ရေး “3 တွေ အပြင်းအထန် ဆွေနွေးနေပါတယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက အချို့ ပေါက်ရောက်သူများက စစ်ဗိုလ်ဟောင်း၊ သားသမီးနာမည်နဲ့ သိမ်းခံထားရတာတွေကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ဆီအထိ တိုင်ြ။ ကတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါလည်း မပြေလည်သေးလို့ အခုတိုင်ရှင်းနေရတုန်းပါပဲ။ မတိုင်ရဲလို့ ငြိမ်ခံနေရသူများစွာ မကြာခင်ပေါ်လာရင် ခက်ရချေမယ်။
လောလောဆယ်၊ ဥပဒေမစိုးမိုးမှု၊ လာဘ်စားမှု အကြီးအငယ်၊ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု၊ အခွန်ကောက်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျတ်ခွဲဝေခြင်း စတဲ့ကိစ္စများဟာ အနာဂါတ်မြန်မာပြည်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ပို၍ပို၍ အရေးကြီးတာကတော့ လယ်မြေဥပဒေ အကောင်ထည်ဖေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်မြေဥပဒေကို အစိုးရက စေတနာနဲ့ တကယ်အကောင်ထည်ဖေါ်ပေးပြီးတဲ့နောက် တောင်သူလယ်သမားများ လယ်မြေပိုင်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တောင်သူလယ်သမားများ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု နည်းသွားပါပြီး၊ လယ်ဧက ၁၀၀၊ ၂၀၀ စသဖြင့် လူတစ်ဦးကပဲ ပိုင်နေကြပါပြီး။ သူရင်းဌားပုံစံ တောင်သူများ လုပ်ကိုင်နေရပါတယ်။ စိုက်ပျိုးလို့ ရတဲ့သီးနှံရောင်းချငွေလည်း လယ်သမားများ ငွေရွှင်လာအောင် လုပ်ပေးရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ ရေမြေ၊ အနေထားသိပ်ကောင်းတော့ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူ တအားဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမားများ ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာ ဖြစ်လာရင် နောက်ပိုင် ၂သီးစိုက်၊ ၃သီးစိုက်ပြီး ခေတ်မီလာမယ်။ တောင်ကိုးရီးယား၊ တိုင်ဝမ် နိုင်ငံများလို့ တောင်သူလယ်သမားများ ဝင်ငွေကောင်းလာပြီး၊ သားသမီးများကို ကျောင်းထားနိုင်လာပါမယ်။ ဒီတော့ တပြည်လုံး ဝင်ငွေမျှတမှု ဖြစ်လာပြီး၊ ဝိသမခရိုနီစနစ်လည်း အလိုလိုပျောက်သွားမယ်။ လာဘ်စားမှုများလည်း အလိုလို နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် လယ်မြေဥပဒေကို လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီးပြောတဲ့အတိုင်း လယ်ယာမြေ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က အမြန်ဆုံး နည်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး၊ ဥပဒေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးအတည်ပြုရပါတယ်။
ဒါဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း၊ အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဖိလစ်ပိုင် အသေးစားနိုင်ငံဘဝ ရောက်မသွားဖို့ လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေ ရေးဆွဲသူများ အထူးဂရုပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုရေးဆွဲတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေဆိုတာ တောင်သူလယ်သမားတိုင်း လယ်ပိုင်ရမယ်ဆိုတာလား၊ အသိမ်းခံလယ်မြေကိစ္စတစ်ခုထဲလားတော့ မသိပါ။ ဆွေးနွေးကြမဲ့ တပ်မတော်သာ ၂၅% ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ကြံခိုင်ရေးပါတီ၊ အင်အယ်ဒီပါတီ၊ တ.စ.ည ပါတီ၊ အင်ဒီအက်ဖ်ပါတီ၊ တိုင်ရင်းသားလူမျိုးစုပါတီများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။
မြေယာဥပဒေ (Land Reform)
အရေးကြီးဆုံးကတော့ တောင်ကိုးရီးယား၊ တိုင်ဝမ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံများလို့ တောင်သူလယ်သမားများ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ ဆိုတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်း အကောင်ထည်ဖေါ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်မှာ အများစုသော ကိုယ်စားလှယ်များဟာ လယ်ယာမြေမပိုင်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရင် ဒီဥပဒေ အတည်ပြုပြီး၊ လက်တွေ့ တကယ်လုပ်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားများ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေးအားလုံး မြေယာဥပဒေ အကောင်ထည်ဖိုလိုမှာပါ။ လက်တဆုပ်စာ ဝိသမခရိုနီအုပ်စုက လွှတ်တော်ထဲမှာ ကန့်လန့်ဖြစ်နေပါတယ်။ လွှတ်တော်လူများစုကို နားလေည်အောင်လုပ်ပေးမဲ့ ပြည်တွင်းပညာရှင်များ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ပြည်ပကလည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့များကို ဖိအားပေးဖို့လိုပါတယ်။ အင်အားကြီးနိုင်ငံကတော့ အမေရိကန်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အားဖြင့် ဂျပန်၊ တိုင်ဝမ်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ စင်ကာပူတို့ ကမ္ဘာထိတ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်လာတာပါ။ တရုပ်ပြည်ကြီးလဲ အမေရိကန်အကူညီနဲ့ အနှစ်၂၀အတွင်း တိုးတက်သွားတာ မျက်မြင်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူပဲ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်သင့်ပါတယ်။
စက်မှုဇုံလုပ်ဖို့၊ စက်ရုံလုပ်ဖို့ သိမ်းထားတယ်ဆိုရင်လဲ မလုပ်ဖြစ်သေးရင် ဥပဒေအရ ပြန်ပေးရမှာပါ။ လုံးဝပြန်မပေးနိုင်ရင်လဲ စက်မှုဇုံဆိုရင် စက်မှုဇုံဈေးနဲ့ ညီမျှတဲ့ ရော်ကြေးငွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးက မြေတွေကို နိုင်ငံတော် ကား၊ ရထားလမ်းဆောက်ဖို့၊ စက်မှုဇုံလုပ်ဖို့ ဘာညာနဲ့ သိမ်းထားပြီး၊ ၃နှစ်လောက်ထိ ဘာမှမလုပ်သေးလို့ ကြေးတိုင်မြေစာရင်းကို သွားစုံစမ်းတော့၊ အဲဒီမြေတွေ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများရဲ့ သားသမီး၊ ဆွေမျိုးများ နာမည်ပေါက်နေတာမျိုး တစ်တိုင်းပြည်လုံး အုန်းအုန်းထနေပါတယ်။ ဒီလယ်မြေကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မောင်ရင်က ပိုင်ဆိုင်နေရတာလဲ ဖြေရှင်းရပါမယ်။ မြန်မာပြည်အနှံအပြားမှာ လယ်တစ်ဧက ကျပ်၅သိန်း၊ ၁၀သိန်း ဈေးနှုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ လယ်တစ်ဧက သီးနှံစိုက်ရင် စက်မှုဇုံ၊ ကားလမ်းဘေး မြေများပဲ ဈေးကြီးပေါက်နေတာပါ။ ခြုံကြည့်ရင် အာဏာရှင်၊ စစ်ဗိုလ်ဟောင်း၊ ခရိုနီများက မြေအများစုကို မပိုင်သေးပါဘူး။ လယ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ပွင်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ပြန်ရပါမယ်။
ပြည်သူလူထုကလည်း လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို ငါနဲမဆိုင်လို့ မနေသင့်ပါ။ လူတိုင်း မြေတကွက်ပိုင်ဆိုင်အောင် မြန်မာပြည်မှာ မြေယာတွေ တပုံတခေါင်းကြီးပါပဲ။ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဝိသမခရိုနီစနစ်ကြီး ပပျောက်သွားဖို့ရာ အရေးယူ၊ ထောင်ချ၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးရင် ရမလား ထင်ကြပါတယ်။ မရပါဘူး။ ပြည်သူတယောက်စီက အခု လယ်မြေ နည်းဥပဒေကို အောင်မြင်စွာကျင့်သုံးဖို့ ကူညီမှာ ၊ ဝိသမခရိုနီစနစ်လည်း ပျောက်သွားပြီး၊ လာဘ်စားမှုများလည်း လျော့နည်းသွားမှာ သေချာပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားမှာ လယ်မြေဥပဒေ အကောင်ထည်ဖေါ်နိုင်လို့ တိုင်းပြည်ကြီးပွားတိုးတက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်တန်းနဲ့သစ်တောနေရာတွေကို ဥပဒေထဲ မထည့်လိုက်မိလို့ အဲဒီနေရာတွေပါ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်း မတရားဈေးတက်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်သလိုပါ။ အဲဒီ တောင်ကိုးရီးယား၊ တိုင်ဝမ် နိုင်ငံများကို နမူနာယူပြီး ဖို့ပါပဲ။ အဲ… ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပဲ နမူနာယူမယ်ဆိုရင်တော့ ခက်ချေပြီပေါ့နော်…။
လွှတ်တော်အများစုဟာ ခရိုနီ၊ လယ်မြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ လူနည်းစုကပဲ စစ်ဗိုလ်ဟောင်း၊ ဝိသမခရိုနီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လွှတ်တော်က လူများစုဟာ လူတော်လူကောင်းများဖြစ်ပြီး၊ ငြိမ်မနေသင့်တော့ပါဘူး။ ကြံခိုင်ရေးပါတီဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ပါတီလူကြီးများက စစ်ဗိုလ်ဟောင်း၊ ခရိုနီများဖြစ်နေလဲ သူတို့အလိုမလိုက်ပဲ ပြည်သူ့အလိုကို လိုက်ရပါမယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေ ဥပဒေ အခန်း ၁၁ ပုဒ်မ ၃၂ တွင် နိုင်ငံတော် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် စီမံကိန်း များအတွက် လယ်ယာမြေကို သိမ်းယူရာတွင် လိုအပ်သော ပမာဏကိုသာ သိမ်းယူရမည် ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း အား သတ်မှတ် ကာလအတွင်း အမြန်ဆုံး ပြီးစီးစေရန် အကောင်အထည် ဖော်ရမည် ဖြစ်ရာ စီမံကိန်း များ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုတော့ပါက မူလ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း ထံ ပြန်လည် ပေးအပ်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း ပုသိမ်မြို့နယ် တရား လွှတ်တော် ရှေ့နေကြီး ဦးကျော်ဇင်က သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။ ပုသိမ်မှန်စက်ရုံအတွက် သိမ်းဆည်းခဲ့သော လယ်ဧက တစ်ထောင်ကျော်မှာ အသုံးမပြုပဲ စက်ရုံမှုးများက သီးစားချပေးခဲ့သည်။ မှန်စက်ရုံမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ စသည့် နိုင်ငံများကို ပြောင်းလဲ၍ အကျိုးတူ လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြသော်လည်း နှစ်စဉ် အရှုံးပေါ်ခဲ့ကာ ယမန်နှစ်က ငွေကျပ် သိန်းပေါင်းများစွာ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်မှုဖြင့် မှန်စက်ရုံမှူး တစ်ဦးအား ပုသိမ်ခရိုင် တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၄၀ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ပုသိမ်ခရိုင် တရားရုံးမှ သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိမ်ယာမြေဈေးနှုန်းတွေ ဈေးကြီးနေတာကို ထိန်းညှိဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ရှိ မရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဇွန်၁၀၊ ၂၀၁၄ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မှာ မေးခွန်းမေးမြန်းရာမှာ ပြည်နယ် နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် အိမ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွန် ကောက်ခံနိုင်ဖို့ လိုအပ်ရင် ဥပဒေပြဌာန်းသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ယုဇနကုမ္ပဏီက ကချင်ပြည်နယ်၊ ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသ၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဝါရာဇွပ် ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းမှ လယ်မြေဧက သုံးသိန်းကျော်ကို စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆိုပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်ခန့် သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ လယ်မြေ တစ်ဧက လျော်ကြေးငွေ ရှစ်သောင်းကျပ် ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ ညှိနှိုင်းမရလို့ ၂၀၁၄ ကချင်ပြည်နယ်မှ ရန်ကုန်၊ ဗဟန်းက ယုဇနကုမ္ပဏီဌာနချုပ်အထိ ၂ကြိမ်လာရောက်ပြီး၊ ထပ်မံ ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအင်ဖရောင်းဂမ်က အဆိုပါ ပြဿနာများအတွက် ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တို့မှ ပါဝင်ဖြေရှင်းရန် အရေးကြီး အဆိုအဖြစ် တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည်အတွက် ကွင်းဆင်း စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကို ၂၀၁၄ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၁။ လယ်ယာမြေ – တောင်သူလယ်သမား၊ လယ်လုပ်သူတိုင်းလယ်ပိုင်စေတဲ့ မြေယာဥပဒေ အကောင်ထည်ဖေါ်ရပါမယ်။
၂။ စက်မှုဇုံ – အသေးစား/အလတ်စား SME လုပ်ငန်းများကို အစိုးရက အားပေးရပါမယ်။ (ဒီအကြောင်း အများကြီးရေးခဲ့ကြပါပြီ)။
ဒါကြောင့် လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အမြန်ဆုံး အကောင်ထည်ပေါ်ရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ-ကမ္ဘာ့အဆင့်မျှော်လင့်နေသူ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပမြန်မာလူမျိုးအားလုံး လယ်ယာမြေဥပဒေအတွက် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်များက ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးများကတော့..
– တောင်သူလယ်သမားတိုင်း လယ်ပိုင်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
– ဝိသမခရိုနီစနစ် ချုပ်ငြိမ်းဖို့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။
– လာဘ်စားမှုမျိုးစုံ လျော့နည်း၊ ပပျောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– စက်မှုဇုံနယ်များကို မြို့နယ်တိုင်းမှာ အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားလုပ်ငန်းများ လုပ်နိုင်လာပြီးရင်..
– တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အရေးလဲ ပြေလည်လာပြီး..
– သာယာဝပြောသော နိုင်ငံ၊ အနည်းဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံအဆင့်ကို ရောက်လာမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
လယ်မြေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ပါစေ…။ ဇာနီကြီး။
1. Dr. You, Jong-Sung Ph.D Harvard University
2. Crony Capitalism, Taiwan, South Korea and Philippine
3. Illegal Land Transfer, Land Reform
4. Income Equality
5. Cost of 1 Acre paddy field in Myanmar to reference
2012 Sample cost to produce rice by University of California
Tags: ကချင်, ဇာနီကြီး
တရုပ်လွှမ်းမိုးမှုကိုမည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်နိုင်မည်နည်း … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (2)
ဇာနီကြီး – အိမ်မြေခြံ ဈေးကြီးအောင်လုပ်သူအဖွဲ့နဲ့ ကာ/လုံ အဖွဲ့ ထိပ်တိုက်ကြဖို့ (0)
ဇာနီကြီး – မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၁၃ဦး၊ ထမင်းစားပွဲ (0)
ဇာနီကြီး – မဘသ နဲ့ အင်အယ်ဒီ ထိပ်တိုက် မတွေ့ရေး (0)
ဇာနီကြီး – ဘတ်စကားခကလွဲပြီး အားလုံးဈေးကြီးရခြင်း အကြောင်း (မြန်မာပြည် ၂၀၁၅) (3)